JECHOOTA OROMOO BARBAACHISOO TOKKO TOKKO
July 13, 2017 Beekan Guluma Post in Oromo [LANGAUGE]
JECHOOTA HOJIIF BARBAACHISOO
Liiban Bitimaa irraa
Namni martinuu waan afaan abbaa-haadha ofii (afaan dhaloota isaa) beekuuf, jechootaa fi sagaleewwan dassiiba-a (“common words”) irratti rakkoo hin qabu. Ammoo, sagaleewwan “jechoota ogeeyyii (“technical terms”) jedhaman irratti hanqina jechootaa qabaachuu dandaya. Keessumaa namoonni afaanota akka Afaan Oromoo jechuun isaan reefu, afaan manneen barumsaa fi manneen hojii faa tahanii irratti gufuuwwan tokko tokko isa dura jiraachuutu mala. Kanallee afaanonni addunyaa sadaffaa keessatti argaman marti ni qabu. Kana jalaa bawuuf, namni sun jechoota afaan san keessatti yeroo yeroon maddaa jiran duukaa-bu’uu qaba. Barreeffanni amma isiniif dhiyaatu kun karaa kanaan hamma wayii isin gargaaruu dandayaa, mee duukaa-bu’aatii galmee keessan irratti feetan keessatti facaafaddhaa!
Afaan Oromoo keenya jechoota hedduu, kanneen akka galaana Abbayyaa waraabamanii, akka cirracha Awaash guuramanii hin dhumne qaba. Afaan kun guutumaa guutuutti afaan sooressa; afaan raajeffamaa dha. Ginni-bittee Habashaa afaan keenya akka ittiin hin barreeffamne, akka ittiin hin baratamne, akka ittiin hin hojjatamne faa waggaalee 130 ol seera baasee, seeraan dhoowwullee fiixaan bawuu hin dandeenye. Phapphaasonnii fi qeessonni fannoo qabatanii: maqaa abbaatiin, maqaa ilmaa fi maqaa hafuura qulqulluutiin magananillee (basima-aab, basima-waldi, basima manfas-qiddus gazzichaalahu!” jedhanillee) homaa hin milkoofne. Ani mataan kiyya bara dhibba kudha sagalii fi saddeettamootaa (“1980s”) keessa ennaan waa barreessuu jalqabeeyyu karaa jechoota dassiibaa rakkoon tokkollee hin turre. Garuu, sagaleewwan ammayyaa irratti waa itti-rakkachuun kiyya hin oolle. Kan nama gammachiisu afaan kun waggaalee 20 keessatti rakkoo jechoota ogeeyyii sanis irra-aanuun sagaleewwan daran baay’ee maddisiifatee argame. Amma akka oggaa sanaa: “ikonomii”, “darajaa”, “pirograamii”, “— maaloo, maaloo faa jechuun loqoduun hin jiru. Oromoonni afaanuma isaanii keessaayyi jechoota kana burqisiifatani. Amma: “sadarkaa, sagantaa, hayyuduree, haalduree, dinagdee, binaggee, malbultii, jalbultii, xindachee, xinjiree — faa jedheetoo Oromoon koo yommuu dubbatu, waan walaloo dubbisu natti fakkaata. Oromoon uummata dubbii dhugaatiif uumame yoon jedhe, mirkana irratti hundaawuuni malee, dubbii hoowwisuu (hoo’isuu) kiyyaa miti!
Mee amma kanaa gadittan akka waayeen kanaa olitti badhaadhina Afaan Oromoo kaase kana, akka sirriitti qalbeeffattaniif isuma beektan keessaa waa isiniif dhiyeessa. Afaan Oromoo goosii (“verb”) tokko irraa goosiiwwan biroo gara jahaa baafachuu dandaya. Mee as irratti jecha “hojjachuu” jedhamu haa fudhannu:
Barreeffatoota amma Afaan Oromootiin ifa argaa jiran garii isaanii keessatti, maqaan magaalaa Oromiyaa Bahaa tokko jallifamuun kitaabamee agartu. “Haroo Maayaa” jechuun warri barreessani kun “Hara Maayaa” jechuu isaanii ti. Oromoonni garri dhibbayyaa 90 (90%) jechoota “hara” jedhamuu fi isa “haroo” jedhamu sirriitti addaan-baafatanii dubbatu, barreessu. Jechoonni kun mataa ofii kan dandayan maqaalee garagaraa ti. “Hara” jechuun isa Afaan Ingiliziitiin “lake” jedhamu. “Haroo”-n garuu isa “pond, pool” jedhamu. Ani akkan qalbeeffaddhetti Oromoonni keenya kanneen Laga Gudar irraa gara lixaatti argaman, yaadundee lamaaninuu “haroo” jedhu. Maqaa “Hara Maayaa” jedhamu kana isa seenaa Oromoo keessa waggaalee 600 ol hulluuqee as gaye kana, nuti amma lafumaa kaanetoo wanni geeddarruuf massaan (sababni) tokkollee hin argamu. Kanaaf, adaraa Waaqaa mee “Hara Maayaa” jenneetuma haa barreeffannu. Akkanuma namoonni tokko tokko magaalaa seena-qabeettii Oromiyaa Waltajjii keessatti argamutu, “Bishooftuu” Haadha Siiqqee fi Abbaa Gadaa “Bushooftuu” jechuun nu jalaa busheessanii barreessu. Waan bakka magaalaa tanaatti harawwan jaha argamanii fi waan bishaaniin Waaqni ishii badhaaseef, Oromoon Tuulamaa lafa bishaan baay’ee qabu jechuun “Bishooftuu” jedhee moggaase. Dhageessaa-ree yaa Bishooftuu araddaa Irreechaa fi qeyee eebbaa!
Akkuman kanaan dura isniif ibse Oromoon uummata dubbii beeku, abbaa beekumsaa waan taheef: lafa isaas, nama isaas dabrees wanneen birootiif maqaalee gaggaarii kennuun moggaasa.
Bakka mukni “adaamii” itti-heddummaatu waan taheef “Hadaamaa” jedhetoo moggaase. Lafa ciraa qabuun “Ciro”, lafa amboo (“Hora”) qabuun “Ambo”, lafa geedni (mukni) ittii heddummaatuun “Geedoo”, lafa seenaan akka idaayaa (misirroo) naqatamteen “Naqamte”, lafa awwaala nama Doolloo jedhamuu irratti makni “dambii” margeen, “Dambii Doolloo” jedhee maggaafate.
Ani kana irratti meeqa himeen dandaya-ree? Biyya Oromoo sadeen Sooddoo keessa tan amma magaalaa taate bakka tokkotu jira. Bakka kanatti muka “harbuu” guddicha tokkotu argama. Guyyaa guyyaa, saafaa keessa oggaa aduun nama waxaltu gaaddisa harbuu kanaa jala horiin dhufanii ciisu. Cululleen isaan kana keessaa “tokkoon isaa boqotaalaa?” jechuun harbuu irra hedduumminaan yaatee, teessee eeggatti. Kana hubachuun Oromoon, “Harbuu Cullullee” jechuun maqaa kenneefi.
Naannoo Meettaa Hoolotaa bakka “Ejersa Lafoo” jedhamutu jira. Namni Bachoo irraa ka’uun gara Meettaa Roobii fi dabrees gara Salaalee deemu, goodaa Bachoo keessa kutee ennaa randa olbayu, warri fardaa dalga goggoruun akka hoddhaa gundootti maramee randa daddhabsiisaa kana baya. Warri akka kiyyaa miilaan xallisu immoo randuma kana kallattiin fuundaratti olbaya. Garuu, hedduu waan daddhabuuf erga olbayee, ejersa guddaa tokko kan achitti argamu jala taa’uun haara-baafata. Kana irraa ka’uun iddoon sun “Ejersa Lafoo” jedhame.
“Oromoonni Afaan Oromootiif fidala (Laatinii) filatanii jiruu, kun dubbii dhumee, namoota Oromoo hin taane ‘wanni isaan galchu hin jiru’, oggaa jedhan dhagayeen jira. — Oromoo qofa yoo tahee fi Oromoonni irratti yoo waliigalan, filmaata jibba irratti hundaawe gochuu dandayu.” Mee yaa Waaq! Kun maal jedhama? Oromoonni dubbii qubees tahee, wanneen biroo irratti yoo waliigalanii filatan, akkamitti wanni sun dubbii jibba irratti bu’ureeffame taha? Akka “barsiisa” Dr. G. Hayilee kanaatti Oromoonni gaafa dhimma mataa isaanii irratti waliigalanii waa filatan, waan hin amanamneef firoota Dr. G. Hayilee Gondorii fi naannoo Manjee faa irraa waammachuu qubu jechaa dha. Amma gaafa Oromoonni: “Seera Bulmaata Toopphiyaa, boqonnaa 39-ffaa” sana irratti hundaawanii hiree ofii ofumaan murteeffatan, lammiiwwan nama kanaatu Oromoota wajjin taa’ee murteessaaf jechuu dhaa? Jibbi namni kun Oromoo irraatti qabu waan ijaa fi sammuu isaa cufeef, gadi of buusee yaada wallalaa fi raatuun tokko dhiyeessuun addunyaatti ifa of-baasa! Uummata Oromoos tahee uummanni Amaaraa, uummata Meeksikoos tahee uummanni Paakistaan, hayyee uummanni kamuu birmada (“sovergne”). Wanneen uummanni kamuu giroo (dhimma) mataa isaa ilaalu irratti filate, filmaata bimadaa waan taheef kabajamuu qaba. Dubbii dhugaa ishii akka heexoo haddhooftu tana, oftuultonni Amaaraa shukkaara Oromiyaa san hamma fedhan itti-makatanii liqimsuu qabu!
Qubeen keenya inni quba Oromoo tahe kun, bara 1992 keessa Oromiyaa guutuu keessatti ennaa ijoolleen Oromoo manneen barumsaa keessatti ittiin barachuu jalqabdu, ilmaan nafxanyootaa isaan Biyya Oromoo keessa jiraatan hiriira bayaanii, barumsa dhaabuun balaaleffatani. Ofii daddhabnaan taabota saaniyyuu karaa qeesota saanitiin daboo waammatanii, taabonni kabajamaan inni ximqataaf laga bulee galu sun: “Sheexanni Qubee jedhamu biyya seenee jiraa, hanga inni biyyaa bawutti ani deemee mana kiyya, bataskaanatti hin galu jedhe”, jechuun uummata ayyaana ximqataatiif baye sanitti lallabani. Isa taabonni “jedhe” kana simaamaloo-dhaan kan uummata Oromootti himan qeesota Amaaraati. Kan taabota mataatti baatee dhaabatus, kan turjumaana taabotaaf dhaabatus qeesota Habashaati. Garuu, uummanni Oromoo erga kana dhagyee, “taabonni asuma dhaabatee bula malee, nuti qubee keenyan afaaan keenya barachuu hin dhiifnu”, jechuun gara mana ofiitti qajeele. Kun kan taheeyyu Oromiyaa Waltajjii, naannoo Ambootti. Oromoon Amboo diina dura goree shimalaan tashattashuu duwwaa otoo hin taane, dubbiinis tashattashuu ittuma-beeka!
Egaa, Oromoonni jibba tokkollee irratti otoo hin hundeeffamin: saayinsii afaanii, mijaawina qubeen afaan saanii akkkuma dubbatamuu fi dhagayamutti sirriitti barreessufii dandayuu filatani. Kunoo, qubeen murtii bira dabree waggaalee 25 Oromiyaa irratti akka utubaa jaanjarootti of gadi-xirribbeessee jira. Si-achi eenyumtuu uummata Oromoo lamuu bara dukkana nafxanyoota durii sanitti, deebisuu gonkumaa hin dandayu! Ammaan tana nuti Oromoonni sammuu fi qubee keenya bilisa baafanneeti jirra. Kan nu hafe san, isa amma kufaa ka’aa jirruuf, birmadummaauummata Oromoo, bilisummaa saba Oromoo fi walabummaa harmee Oromiyaa garaa-dakaa labnee wal-labsinee, sochoonee wal-sochoofnee, hidhannee wal-hidhachiifnee, tokkummaa fi obbolummaan wal-jifaarree gonfanna! Kana irraa ibiddi manneen hidhaa akka Qilnxoo faa, kumaatamaan gorra’amuun akka gaafa Irreecha Bishooftuu faa, dhiigni ijoollee Oromoo inni Oromiyaa guutuu irratti akka lolaatti dhangalaye faa, lafeen Oromootaa inni akka qoraaniitti caccabee lafa guutee faa qabsoo teenya haddhooftuu ammoo kan bu’aaan ishii mi’ooftuu san irraaa waa takkallee duubatti nu hin deebisu! Kakakuu dha; laguu dha; hooda, hoolauummata Oromoo harqoota gabrummaa jalatti hin dhifnu!
JECHOOTA AFAAN OROMOO TOKKO TOKKO KANARRAA BARADHAA!!